Safiirka Soomaaliya oo sheegtay in ay Itoobiya ku taageereyso dhismaha biya xireenka Webiga Nile. – iftiin fm
Safiirka Soomaaliya oo sheegtay in ay Itoobiya ku taageereyso dhismaha biya xireenka Webiga Nile.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Danjire Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay si buuxdo u taageersantahay biyo xireenka Itoobiya ay ka sameyneyso webiga Nile, kaas oo ay Dowladda Masar diiddantahay.
← DHAGEYSO: Shacaabka deeganka Mugirango oo walaac ka muujiyay waddooyinka deegankasi.
Eugene Wamalwa oo Afka furtay →